Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Njem Virgin na -aga ugbu a na Nassau na Bimini
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem Virgin na Bahamas
Site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na -abawanye na mmachi njem na -ebili gafee ụwa, ahịrị ụgbọ mmiri na -alaghachi n'ike n'ike n'akụkụ Caribbean. Nwanyị na-acha uhie uhie Virgin Voyages, ụgbọ mmiri okomoko ọhụrụ, malitere oge njem ụgbọ mmiri ya na Caribbean, na-eme mpụta mbụ ya na Bahamas nwere abalị anọ "Fire and Sunset Soirées," gụnyere nkwụsị na The Beach Club na Bimini. N'izu gara aga, a na -eme emume mmalite n'isi obodo na Bimini, ebe osote onye isi ala na onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu Honourable I. Chester Cooper na Director General Joy Jibrilu nabatara ahịrị ụgbọ mmiri n'agwaetiti nke Bahamas.
Njem njem kwa izu ga -emetụta akụnụba mpaghara.
Lady Scarlet ga -eme njem njem kwa izu na Bimini na Nassau n'ime ọnwa asaa sochirinụ, malite na Ọktoba 2021 ruo Mee 2022.
Usoro ụgbọ mmiri chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị ọbịa na ndị ọrụ. A ga-anwale ndị njem maka Covid-19 tupu ịbanye, ego nke ahịrị ụgbọ mmiri kpuchiri.
N'oge mmemme mmalite na Bimini, osote onye isi ala Cooper kwupụtara nchekwube ya maka uto akụ na ụba na -atụle mmekọrịta ọhụrụ a. “Njem ụgbọ mmiri kwa izu ga-emetụta akụ na ụba mpaghara, ndị ọbịa ga-enweta ọ joyụ niile nke otu ụbọchị na obere agwaetiti nke ebe okpomọkụ, site na ịkpa oke n'okirikiri mara mma nke ntụ-nro, aja aja ọcha, ruo njem ndị na-ewe ha. nnukwu ịkụ azụ, igwu mmiri n'oké osimiri, kayak na iso dolphin na-emekọrịta ihe, "osote onye isi ala Cooper kwuru.
Onye isi Director Joy Jibrilu kwughachiri echiche nke osote onye isi ala Cooper na emume mmalite nke emere na Nassau, "Njem njem njem Virgin Voyages nke na -egosipụta otu ụbọchị na Nassau na otu ụbọchị na Bimini ga -enye ohere maka ndị ọbịa gị karịrị 2,700 ka ha nwee ahụ ụtọ. Bahamas dị ka ha chọpụta ụfọdụ n'ime Bahamas'saịtị akụkọ ihe mere eme na ebe nlegharị anya mbụ ma soro ndị anyị na -ekpo ọkụ na -ele ọbịa na -emekọrịta ihe. ”
Ụgbọ mmiri ndị okenye naanị ya na-anabata ndị njem 2,770 (gụnyere ndị ọrụ ụgbọ mmiri) na ebe iri nri na ihe ọ 24ụverageụ XNUMX. Ụgbọ mmiri ahụ nwekwara ọtụtụ ebe mmemme, cha cha anwụrụ ọkụ, arcade, ebe mgbatị ahụ nwere oghere na ihe ndị ọzọ.
Lady Scarlet ga-eme njem njem kwa izu na Bimini na Nassau n'ime ọnwa asaa na-abịanụ, malite na Ọktoba 2021 ruo Mee 2022. N'idebe usoro iwu Covid-19 yana iji hụ na nchekwa, ahịrị ụgbọ mmiri chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ma ndị ọbịa ma ndị ọrụ. A ga-anwale ndị njem maka Covid-19 tupu ịbanye, ego nke ahịrị ụgbọ mmiri kpuchiri. Usoro iwu ahụike nọ n'ụgbọ ahụ gụnyere idebe ihe ọcha, ịdọpụ uche anụ ahụ, ịnwe ọnụnọ pere mpe na itinye ntuziaka gọọmentị ime obodo ebe ọ bụla.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara njem ụgbọ mmiri Virgin Voyages, gaa Virginvoyages.com.